Mpanakanto 15 taona mampiasa ny Wacom hamoronana izao rehetra izao | Famoronana an-tserasera
Efa nihaona tamin'ny fotoana vitsivitsy izahay ny fahazazana niarahan'ny mpanakanto sasany Manomboka amin'ny zavakanto izy ireo manolotra famoronana maro, famoronana, ary io lafiny fahatanorana io izay manova azy ho zava-baovao azonao amin'ny asany tsirairay avy. Matetika ny olona sasany dia mahita ny fomban'izy ireo amin'ity lalam-pianarana ity, zavatra ilaina hanombohana amin'ny tontolon'ny famolavolana sarotra, farafaharatsiny mba hametrahana ny tenany ho matihanina miankina amin'ny tenany.
Paulo Victor Graner dia Mpanakanto 15 taona fa tamin'ny Wacom azy dia nosarihiny, tamin'ny fotoanany, fanangonana sary hosodoko niomerika tao anatin'ny efa-bolana lasa izay nantsoiny hoe "Hierarchy Monstrous." Nalaina avy tao amin'ny Wacom Cintiq, ireo sanganasa nomerika ireo dia mitantara ny karazana biby goavambe isan-karazany izay nanampian'i Paulo firafitra hierarchical aza.
Izy tenany mihitsy no milaza fa tsy tena hainy ny fomba ny «Hierarchy mampatahotra» Tonga tao an-tsainy izany ary rehefa nilaza izy fa tia manao sary zavaboary, noho izany dia nasehony voalohany ilay niantso azy ho Mpanjaka, ka tamin'izay fotoana izay dia tonga tao aminy ny hevitra momba ny mpanjaka sy ny feodalism.
Nampahatsiahy azy ny feodalism izany rafitra hierarchies izay nanombohany miaraka amin'ny fitiavany hanao sary biby goavam-be kokoa mba hamoronana io rafitra na rafitra io iray manontolo.
Avy amin'ny alika demonia izay Biby fiompy mpitsara, izay miandraikitra ny fandanjana ny fanahy ary manapa-kevitra hoe iza no mijanona ao amin'ny tontolo ara-panahy. Na ny Nadeguy, mpamorona an'izao rehetra izao ary iza no tena zaza ary zavaboary liana indrindra eo amin'izao rehetra izao, ka tiany ny mifanerasera amin'ny zavaboariny manokana.
Anananao izao rehetra izao avy amin'ny tranokalanao ary io tantara io izay nifandray tsirairay amin'ireo dragona an-tsary miaraka amin'ny talenta sy famoronana lehibe. Ny tontolony manokana izay andehanany miaraka amin'ireo zavaboariny.
Biby goavambe an'ny zodiaka avy eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mpanakanto mbola tanora 15 taona dia mampiseho an'izao rehetra izao an'ny monster miaraka amin'i Wacom